UMchunu ufuna kuphenywe ngengozi ebandakanye unogada wakhe | News24
UMchunu ufuna kuphenywe ngengozi ebandakanye unogada wakhe
UNdunankulu uMnuz Senzo Mchunu ufuna ukuba kwenziwe uphenyo ngengozi eyenzeke ku-N2 eNonoti, KwaDukuza, ngoLwesihlanu ebusuku yabulala abantu ababili. Isithombe: IPSS Medical Rescue
UNDUNANKULU waKwaZulu-Natal uMnuz Senzo Mchunu useyalele ukuba kwenziwe uphenyo ngesigameko sengozi eyenzeke ku-N2 eNonoti, KwaDukuza, ngoLwesihlanu ebusuku ebibandakanya unogada wakhe oyedwa yabulala abantu ababili.
Esitatimendeni, uMnuz Mchunu uthe kumshaqisile ukuzwa ngesigameko esidlule nabantu ababili. Wathi kunemibuzo emningi engaphendulekile nemibiko edidayo ngezigameko ezahlukene kulo mzila.
Uthe: “Yingakho ngicele u-Advocate uLinda Zama ongumeluleki wami ukuba asebenzisane neziphathimandla ukuba kutholakale ukuthi kwenzekeni,” usho njalo.
UMnuz Mchunu uthe uyethemba ukuthi amaphoyisa azomthola umshayeli weloli okuthiwa libalekile endaweni yesigameko.
“Kubalulekile ukuthi kutholwe ukuthi bangaphi abantu ababandakanyeke kule ngozi nokuthi ngabe bakhona abebekhona ngesikhathi yenzeka abangakwazi ukulekelela.
“Sifuna ukuba kutholakale imbangela yengozi mayelana nemoto yohlobo lweToyota Yaris ebandakanyeka kule ngozi edlule nababili. Kusolwa ukuthi imoto ekuhlaza iphume emgwaqeni yayishayisa imoto yamaphoyisa,” kusho uNdunankulu.